Version 0.9.9.0 – Shaqaalaha dunida – midoobaan!
May 1, 2016 by dalabyo 8 Comments
Wixii hore ee May, maalin shaqaalaha caalamiga ah, waxaannu ugu dambeyntii sii daayay version aad u soo daahday oo la filayo of 0.9.9.0.
Waa maxay version this wanaag?
First – taageerada ay u hayaan Baidu, Rafaa Chinese search engine oo kale oo ay leeyihiin turjumaad, oo taageero u Cantonese taas oo ah halkii gaar ah engine this. Waxa kale oo wanaagsan ay tahay in la engine this, websites in ay yihiin marti ku Shiinaha u heli kartid engine a turjumaad shaqeeya.
Labaad – waannu go'an taageerada hadda muhiim ah ka yar labada Google iyo Yandex, si dhab inay mar kale hadda ka shaqeeyaan. Sidaas darteed haddii a bogagga yar ee your site aan la tarjumin, version cusub helay kugu daboolay. A luuqado yar lagu daray in geeddi-socodka.
saddexaad – badan oo isbedel, daro oo la rajeenayo in cayayaanka ku wareegsanaa oo dhan. Haa, waxaan u baahan si uu u xaliyo qoraallada iyo FAQ qaar ka mid ah.
Maxaad weli reading this? Just u cusboonaynta maanta, iyo berri shaqada!